Home समाचार अन्तरास्ट्रिय इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामको जित ,
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामको जित ।
समर विन्डोमा अनुबन्ध भएका वेल्स स्टार ग्यारेथ बेलले दोस्रो हाफमा मैदान छिरेर निर्णायक गोल गरेपछि टोटनह्यामले जितको नतिजा निकालेको हो। आइतबार राति भएको खेलमा टोटनह्यामले आफ्नो घरेलु मैदानमा पाहुना टोली ब्राइटनलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो।
टोटनह्यामको जितमा ह्यारी केनले पेनाल्टीमार्फत शुरुआती गोल गरेका थिए। खेलको १२औं मिनेटमा ब्राइटनका खेलाडीले डिबक्समा ह्यारी केनलाई लडाएपछि रेफ्रीले भिएआरमार्फत टोटनह्यामलाई पेनाल्टी दिएका थिए। जसमा केनले गोल गरेर टिमलाई १–० ले अगाडि पारेका थिए। तर, ब्राइटन खेलको ५६औं मिनेटमा खेलमा फर्कियो। ब्राइटनका लागि टाक्र्वी लाम्पाटेले गोल गरेर खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए।
Previous articleबलात्कारका आरोपित महोत्तरीको वडासचिव मिथिलेश यादव कारागार चलान
Next article“कहिले सम्मा सहने दाइजोको बाहानामा यातना ? “
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र भोटेकोशी गाउँपालिका एक दर्जन भन्दा बढी घरहरु बगाए
श्रीमती हत्यारा, पुर्व डि.आई. जि.को बिरुद्ध जन्मुक्ती सेनाको असन्तुष्टि ।।
सर्वोच्च अदालतले मोदीलाई दियो ठुलो झट्का